BYD Seal EV မော်ဒယ်ကို ဇွန်လ တွင်စတင် ထုတ်လုပ် သည် - Pandaily
BYD Seal EV မော်ဒယ်ကို ဇွန်လ တွင်စတင် ထုတ်လုပ် သည်
Jun 13, 2022, 12:00ညနေ 2022/06/13 14:16:29 Pandaily
BYD Seal သည် ယခုလ တွင် အကြီးစား ထုတ်လုပ်မှုကို စတင် မည်ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ လစဉ် ထုတ်လုပ်မှု မှာ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။Jiangsu ပြည်နယ်၊ Changzhou တွင် Weibo ပို့စ် တစ်ခုဇြန္ ၁၂ ။
SEAL သည် e-platform 3.0 ဗိသုကာ အပေါ် အခြေခံ၍ အလယ်အလတ် အရွယ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဖြစ်ပြီး Dolphin ပြီးလျှင် BYD Marine Life Electric ကား စီးရီး ၏ဒုတိယ ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ေမာ္ဒယ္ ၄ မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားၿပီး ႀကိဳတင္ ေရာင္းခ် တဲ့ ေစ်း ႏႈ န္းက ယြမ္ ၂ ၂၁, ၈၀၀ ကေန ၂ ၈၉, ၈၀၀ (ေဒၚလာ ၃၁, ၅ ၈၂ ကေန ၄, ၃၀ ၁၀) အထိ ရွိပါတယ္။ ေမ ၂၀ ရက္က ႀကိဳ ပြိဳင့္ စတင္ ေရာင္းခ် ၿပီးေနာက္ ခုနစ္ နာရီအတြင္း မွာယူ မႈ ၂၂, ၆ ၃၇ မႈ ရရွိခဲ့သည္။
SEAL မော်ဒယ် ရဲ့ ကိုယ်ထည် အရွယ်အစား ကတော့ ၄၈ ၀၀18751460 mm, 2920 mm ၏ ဘီး အခြေစိုက်စခန်း ။ ပထမ ဆုံးအနေဖြင့် ကား သစ် သည် CTB (Cell-to-Body) နည်းပညာ၊ iTAC နည်းပညာ နှင့်နောက် ဘီး drive ဗိသုကာ ကိုအသုံးပြုသည်။ ဗဟို ထိန်းချုပ် မှုတွင် Corsair သည် နောက်ဆုံးပေါ် DiLink အသိဉာဏ်ရှိသော ကွန်ယက် ချိတ်ဆက် မှုစနစ် ကိုအသုံးပြုသည်။ ၁၅. ၆ လက်မ မျက်နှာပြင် လိုက်လျောညီထွေ ရှိသည့် rotary suspension pad ပါ ရှိပြီး 5G ကွန်ယက် ဆက်သွယ်မှု ကိုထောက်ပံ့ နိုင်သည်။
တရုတ် စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ BYD Seal တွင် ပါဝါ ဗားရှင်း သုံးမျိုး ရှိသည်။ ၅၅၀ ကီလို မီတာ၊ နောက်ဘက် တစ်ခုတည်း မော် တာ၊ စုစုပေါင်း ပါဝါ ၁၅၀ ကီလို W ၊ စုစုပေါင်း torque 310N-m ၊ အရှိန် ၇. ၅ စက္ကန့် ၊ နောက်ဘက် တွင်စုစုပေါင်း စွမ်းအင် ၂၃၀ kW ၊ စုစုပေါင်း torque 360N-m သို့ တိုး။ အရှိန် ၅. ၉ စက္ကန့် ဖြင့် မော်တာ တစ်ခု၏ 700km ဘက်ထရီ ဗားရှင်း ကိုအသုံးပြုသည်။ ရှေ့ နှင့်နောက် မော်တာ များ၏ ၆၅၀ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး ၊ စုစုပေါင်း စွမ်းအင် ၃ ၉၀ ကီလိုဝပ် ၊ စုစုပေါင်း torque ၆ ၇၀ N-m နှင့် အရှိန်မြှင့် ချိန် ၃. ၈ စက္ကန့် ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD SUV Don DM-p သည် $43,761 မှ ကြိုတင် ရောင်းချ မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
China Passenger Car Association (CPCA) မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက်က ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းများအရ မေလတွင် တရုတ်၏ ခရီးသည်တင် ကား ရောင်းအား သည် ၁. ၃ ၅၄ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆. ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ BYD သည်ထို လတွင် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး လက်လီ ရောင်းချ မှု ၁၁၄, ၀၀၀ ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁ ၅၉. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Tags BYD SEAL | BYD* | tutoring
၂၀၂၁ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း ခြင်း စာရင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ တွင်တရုတ် မော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ် သူ များအသင်း (CADCC) နှင့် Chegu တို့သည် ၂၀၂၁ တရုတ် မော်တော်ယာဉ် တန်ဖိုး ထိန်းသိမ်း ခြင်း အစီရင်ခံစာ ကိုပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Auto Jan 10 ဇန်နဝါရီ 10, 2022
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ တွင်တရုတ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် အား သုံးသပ် ခြင်း
အင်္ဂါ နေ့တွင် China Passenger Car Association (CPCA) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ အတွက် အမျိုးသား ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Auto Jan 11 ဇန်နဝါရီ 11, 2022
BYD ဥက္က Chairman ္ဌ-စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း သစ် ၏အနာဂတ် သည် ထောက်လှမ်းရေး တွင်တည် ရှိသည်
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD သည် ၂၀၂၁ နှစ်ပတ်လည် ရှယ်ယာရှင် များ အစည်းအဝေးကို ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ BYD ဥက္က Chairman ္ဌ Wang Chuanfu က အစည်းအဝေးတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သည်ပထမ ပိုင်းတွင် လျှပ်စစ် နှင့်ဒုတိယ ပိုင်းတွင် အသိဉာဏ် ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။